ကားဂိုဒေါင်ရောင်း ၀ ယ်မှုဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အိုးအိမ်စွန့်ခွာသွားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်အားစက်ပစ္စည်းများရောင်းချပေးသောကုမ္ပဏီများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ့ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေပေးပါလို့ကုမ္ပဏီတွေကိုတောင်းတယ်…ငါ့မြေအောက်ခန်းကပြည့်နေတယ်။ freebies တွေအများကြီးရယူလိုက်ပါ။ ငါ့ကိုအဆင်မပြေဖြစ်စေတယ်။ ငါ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုငါကြိုက်တယ် (ငါမကြိုက်တာကိုပြောဖို့ရွေးတာ၊ ငါ့မှာအကြွေးတင်တာကြောင့်) ။ ဒါကြောင့်ဂိုဒေါင်ရောင်း ၀ ယ်တုန်းကစုဆောင်းထားတဲ့ငွေအားလုံးကိုငါရွေးခဲ့တယ်။
ကွိဘက်မှာရှိတဲ့နေရာတိုင်းကလူငယ်တိုင်းကိုကူညီပေးတဲ့ထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Dumouliဒေါ်လာ (၄၅၀၀၀) နီးပါးတန်ဖိုးရှိသောဂိမ်းများနှင့်ဆော့ဝဲများကိုလှူဒါန်းသည့်အတွက်အကြိမ်ပေါင်း ၄၅၀၀၀ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကားဂိုဒေါင်တံခါးအတွက် Garaga ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ minimoto.ca အပါအ ၀ င်သင်္ဘောပေါ်ပါလာကြသောအခြားကုမ္ပဏီများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်နှစ်မှာဒီပွဲကိုသေချာပေါက်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
Amazon တွင် ၁၀ less အောက်ရှိသောကြိုးမဲ့နားကြပ်
2021-08-18 15:31:36 | သိကောင်းစရာများ...
သေချာတာပေါ့၊ မင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်တယ်၊ အဲဒါကနာမည်ကြီး Apple AirPods အကြောင်းမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီစျေးအတွက်ဘာကြောင့်မစုံစမ်းတာလဲ။ Amazon တွင် Dudios ကြိုးမဲ့နားကြပ်များသည်ယူရို ၁၆ မှနုတ်ယူသောကူပွန်မှကျေးဇူး ၉. ၉၉ သည် Amazon မှ Dudios ကြိုးမဲ့နားကြပ်> D ၉. ၉၉ ဖြစ်ပြီး Amazon Dudios ကြိုးမဲ့နားကြပ်မျ...
Samsung Galaxy A12 128 GB: ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် Darty တွင် ၁၈၉ to အထိမြင့်တက်လာသည်
ဘဏ်ကိုမချိုးဘဲစမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာအရမ်းသက်သာတဲ့ဈေးတစ်ခုရှိတယ်။ Darty တွင် Samsung Galaxy A12 ကို ၁၈၉ at တွင် ၁၀% လျှော့ချခြင်းဖြင့်ပြသသည်။ Darty ရှိ Samsung Galaxy A12> ၁၈၉ €Samsung Galaxy A12 သည် Darty တွင်စျေးလျှော့သည်မှာသေချာသည်။ နည်းပညာမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အကောင်းဆုံး...
မန်ချက်စတာစီးတီး OM၊ ယနေ့ညချန်ပီယံလိဂ်ကြည့်ရန်နေရာ
2021-08-18 15:30:43 | သိကောင်းစရာများ...
ယနေ့ညချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဆင့်နောက်ဆုံးနေ့ Marseille ကလပ်အသင်းပရိသတ်များသည်ယနေ့ည ၉ နာရီတွင်စတင်မည့် Manchester City OM streaming တွင်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအသင်းကိုလိုက်နိုင်လိမ့်မည်။ ကစားသမားများသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်အနိုင်ရပြီးနောက်တောင်စောင်းကိုဆက်လက်တက်နိုင်မလားဆိုတာငါတို့သိပါလိမ့်မယ်။ Marseille ပရိသတ်များ...
ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်၊ Redmi Note 8 Pro ကို Amazon.fr free ၌အခမဲ့ကျသည်
2021-08-18 14:21:22 | သိကောင်းစရာများ...
ဤပြင်သစ်နေ့များအတွက် Amazon သည်လူကြိုက်များသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းများဖြင့်အလွန်ပြင်းထန်စွာစတင်သည်။ ၎င်းတို့အနက် Xiaomi မှအလွန်အစွမ်းထက်သော Redmi Note 8 Pro သည်ငွေ၏မယှဉ်နိုင်သောတန်ဖိုးကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ နဝမဗားရှင်းဗားရှင်းဖြန့်ချိပြီးကတည်းကဒီကိရိယာရဲ့စျေးနှုန်းကပိုကျဆင်းသွားတယ...
Nest Audio စမတ်စပီကာသည် flash ရောင်းဈေးနှင့်အတူပေါင် ၈၇.၉၉ သို့ကျဆင်းသွားသည်
2021-08-18 13:50:42 | သိကောင်းစရာများ...
နာရီ ၂၀ အတွင်းကုန်ဆုံးမယ့် flash sale ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်ဒီ Nest Audio ချိတ်ဆက်ထားသောစပီကာကို€ ၉၉. ၉၉ အစား€ ၈၇. ၉၉ ဖြင့် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်သည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Nest Audio နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစပီကာသည်ယခုအခါ Google Home အတွက်အစားထိုးလာပါပြီ။ ပိုမိုအစွမ်းထက်။ အလွန်သပ်ရပ်သောဒီဇိုင်းမျာ...
Switch on Hyrule ၏ Cadence သည် Amazon တွင်€ 30 ထက်နည်းသည်
2021-08-18 13:50:29 | သိကောင်းစရာများ...
၎င်းသည်သင် Nintendo Switch ကိုပိုင်ဆိုင်လျှင်လက်မလွှတ်သင့်သောကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ Hyrule ဂိမ်း၏ Cadence of the Game သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလျှော့စျေးမှ ၄၉. ၉၉ အစား€ ၂၉. ၅၄ သို့သွားသောကြောင့်၎င်းသည် Amazon ၌€ ၂၉. ၅၄ သို့ချက်ချင်းသက်သာသည်။ စက္ကူမာရီယို The Origami King အပြီးတွင် Swit...
French Days Amazon: ယနေ့ညကုန်ဆုံးမည့် SHOCK ၅ ခုကမ်းလှမ်းချက်များ
2021-08-18 13:04:41 | သိကောင်းစရာများ...
၂၀၂၀ တွင် Amazon သည်ယခင်ကကဲ့သို့ပြင်သစ်နေ့များကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရဤဖြစ်ရပ်သည်“ Made in France” ဖြစ်ခဲ့လျှင်စျေးကွက်၌နံပါတ် ၁ သည်သူ့ကိုယ်သူဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဟန်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤထုတ်ဝေမှုအတွက် Amazon သည် Fnac, Cdiscount နှင့် Darty တို့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည်။ AliExpress သည် sp...
French Days: Amazon သည်စျေးနှုန်းများကိုချိုး ဖျက်၍ ထိပ်တန်း ၁၀ ကမ်းလှမ်းချက်များ
2021-08-18 13:01:38 | သိကောင်းစရာများ...
ပြင်သစ်နေ့များကိုမနက်ဖြန်နံနက်တွင်တရားဝင်စတင်နေစဉ် Amazon နှင့် Fnac ကဲ့သို့ကစားသမားအချို့က ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ အချို့သောသရုပ်ဆောင်များအတွက်ချုပ်နှောင်ခြင်းသည်နာကျင်စေလျှင်ဤအထူးစစ်ဆင်ရေး Made in France အတွက်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ ယနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်တွင်ဤပြင်သစ်နေ့များအတွက် Amazon, Fnac, D...
ဧပြီလ Flash Sale - Windows 10 ကို GoDeal24 တွင် ၇.၂၅ ပေါင်သာကျသင့်သည်။
2021-08-18 12:38:59 | သိကောင်းစရာများ...
GODEAL24. COM တွင်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုကြည့်ပါ၊ သင်၏ PC ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်လိုသော်လည်း Windows 10 လိုင်စင်အတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကျော်မတတ်နိုင်ပါ။ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမဖြစ်ပါနှင့်။ Godeal24. com မှရောင်းအားကြောင့် Windows 10 လိုင်စင်များကိုသာမက Office 2016 (သို့) 2019 သော့များကိုလည်းစျေးသက်သာစွာရနိုင်သည်။ ဥပမာအ...
ကောင်းသောအစီအစဉ်၊ Samsung Galaxy S10 သည်သိသိသာသာကျဆင်းနေသည်။
2021-08-18 12:36:32 | သိကောင်းစရာများ...
Samsung နှင့်၎င်း၏ Galaxy S10 lineup တို့သည်ယခုမေလပိတ်ရက်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ Cdiscount, Fnac (သို့) တရားဝင် Samsung ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပင်ဖြစ်စေ၊ ထုတ်လုပ်သူအားလုံး၏ကိရိယာများတွင်ဖြစ်စေစုဆောင်းရန်များစွာသောစုဆောင်းငွေများရှိသည်။ သင် Premium Galaxy S10 ဗားရှင်းသို့ ဦး တည်သည်ဖြစ်စေ၊ စျေးပိုသက်သာသော ...
PS5 ကြိုတင်အော်ဒါ 🔥
2021-08-18 12:29:04 | သိကောင်းစရာများ...
၂ နှစ်ကြာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် Sony သည် PS5 နှင့် PS5 Digital Edition အတွက်စျေးနှုန်း၊ ဖြန့်ချိမည့်ရက်နှင့် pre-order တို့ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်မိတ်ဆက်ပွဲပြီးဆုံးချိန်၌ဂျပန်များသည်ကြိုတင်မှာယူမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ကုန်သည်များတွင်ရနိုင်သောပမာဏများသည်မုန်တိုင်းကြ...
Bouygues Telecom တွင်လျှော့စျေးဖြင့်ကတိမတည်ဘဲ 200GB အစီအစဉ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်နောက်ဆုံးအချိန်များ။
2021-08-18 12:22:56 | သိကောင်းစရာများ...
BOUYGUES TELECOM တွင် 200GO အထုပ်ကိုကြည့်ပါ၊ အကယ်၍ သင်မယှဉ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောအထုပ်တစ်ခုကိုရှာနေဆဲဆိုလျှင်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုမတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ မည်သည့်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေသောအထုပ်သုံးထုပ်ရှိသည်။ B & You ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစာရင်းသွင်းရန်မလိုအပ်ဘဲတစ်လလျှင် ၁၄. ၉၉ ယူရိုသာ ပေ...
ကောင်းသောအစီအစဉ် -DJI Mavic Pro မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ရောင်းအားအတွက် -35% ကျဆင်းသွားသည်
2021-08-18 12:02:08 | သိကောင်းစရာများ...
အရောင်းစတင်ချိန် မှစ၍ Amazon သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ဤနွေရာသီထုတ်ဝေမှုအသစ်အတွက်သူသည်ဒရုန်းများကိုအထူးပြုသော DJI အပါအ ၀ င်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အားလုံးကိုရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်၎င်း၏စျေးနှုန်း ၃၅%ကျဆင်းသွားသောအလွန်ကောင်းသော DJI Mavic Pro Fly More Combo pack ဖြစ်သည...
Resident Evil Village သည် Micromania တွင် ၅ less ထက်နည်းသည်
2021-08-18 11:33:44 | သိကောင်းစရာများ...
သင်ငွေချွေတာနေစဉ် Resident EvilVillage ဂိမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိချင်လျှင် Micromania မှကမ်းလှမ်းထားသောဤကြီးကျယ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှာဖွေရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ အမှန်တော့၊ လောလောဆယ် ၄. ၉၉ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ Residence Evil Village> Micromania မှာ Resident Evil Village> € 4.99 esResident Evil Village ကို€ ...
ကောင်းသောအစီအစဉ်: Garmin နာရီကို Amazon (၄၅%)aလျှော့ဈေးဖြင့်ပေးသည်
2021-08-18 10:30:19 | သိကောင်းစရာများ...
Black Friday ၏အစအတွက် Garmin နာရီများသည် Amazon ၌သူတို့၏စျေးနှုန်းကျဆင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ Forerunner 735XT သည်ပစ္စည်းပြတ်နေပြီဆိုလျှင်သူတို့၏စျေးနှုန်းကျဆင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသောအလွန်ကောင်းသော Fenix ​​6 Pro 6X Pro များရှိသည်။ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းရှုံးတဲ့ Garmin Instinct နဲ့အတူတူပါပဲ။ Gamin Fenix ​​6X Pro ကိ...
Bose နားကြပ် ၇၀၀ နားကြပ်သည် Amazon တွင် ၁၅၀ €လျော့ချသည်
2021-08-18 09:54:59 | သိကောင်းစရာများ...
Amazon ကျေးဇူးကြောင့်သင်ဤအလွန်ကောင်းမွန်သောဆူညံသံကိုပယ်ဖျက်နိုင်သောနားကြပ်ဖြစ်သော Bose Headphones 700 ကိုထူးခြားစွာလျှော့ချခြင်းဖြင့် AmazonBose တွင် ၇၀၀၊ ၂၅၀. ၈၁ instead ၌လက်ရှိတွင်€ 250.81 ဖြင့်ပြသသည်။ နားကြပ် ၇၀၀ သည် Amazon တွင်အတိုးနှုန်းသက်သာသောစျေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ကတက်ကြွသောဆူညံသံလျှော့ချ...
အင်တာနက်ဘောက်ဆာ: SFR သည်၎င်း၏စျေးနှုန်းများကိုချိုး ဖျက်၍ ၇၅% ယခုအပတ်ပိတ်ရက်
2021-08-18 09:42:52 | သိကောင်းစရာများ...
မင်းရဲ့အင်တာနက်အကွက်ကိုပြောင်းတာကအစပိုင်းမှာနည်းနည်းရှုပ်ထွေးပုံရတယ်။ သို့သော်လည်းမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစျေးကွက်သည်ပိုမိုပွင့်လင်းလာသည်နှင့်အမျှအချို့သောပေးသွင်းသူများသည်၎င်းတို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုပိုမိုနားလည်။ ဖတ်နိုင်စေခဲ့သည်။ ဤဆောင်း ဦး ရာသီအတွက် FAI သည်ကြီးကျယ်သောအရောင်းမြှင့်တင်မှုများပြုလုပ...
Huawei Watch GT2သည် Cdiscount တွင် ၁၀၀ €အောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်
2021-08-18 07:59:41 | သိကောင်းစရာများ...
ပြင်သစ်နေ့များကုန်ဆုံးလာသည်နှင့်အမျှဤကြီးမားသောအပေးအယူများကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်သင်နာရီအနည်းငယ်ကျန်သေးသည်။ Cdiscount တွင်အစိမ်းရောင်ဖြင့် Huawei Watch GT2ချိတ်ဆက်ထားသောစမတ်နာရီသည် ၉၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး၊ ဤပုံစံအတွက်ထူးခြားသောစျေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huawei Watch GT 2> Cdiscount တွင် Huawei Watch GT 2> ၉၉ ပ...
Switch on FIFA 21 သည်ပေါင် ၁၅ ထက်နည်းသည်
2021-08-18 07:59:33 | သိကောင်းစရာများ...
Amazon နှင့် Cdiscount နှစ်ခုလုံးသည် Nintendo Switch ရှိ FIFA 21 ဂိမ်းအတွက်အလွန်လျှော့စျေးကိုပေးသည်။ အမှန်မှာ၊ ဂိမ်းသည်€ ၄၉. ၉၉ အစား ၁၄. ၉၉ ဒေါ်လာသာကျသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၇၀% ကျော်ချက်ချင်းသက်သာသည် ။FIFA 21 Nintendo Switch> Amazon တွင်€ ၁၄. ၉၉ မင်းကပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမင်း Nintendo Switch မှာ FIFA ...
၆၀ only သာရှိသောအလွန်ကောင်းမွန်သော UE Boom2Bluetooth speaker
2021-08-18 07:46:51 | သိကောင်းစရာများ...
Logitech ၏လက်အောက်ခံ Ultimate Ears သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းအယ်ဒီတာ့အာဘော်ရုံးများတွင်များစွာသောအယ်ဒီတာ့အာဘော်ရုံးများ၌အောင်မြင်ခဲ့သော cylindrical Boom အသံချဲ့စက်ကိုစျေးကွက်တင်ရောင်းချခဲ့သည်။ IP67 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည်ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး၊ ၎င်းကိုပတ်ဝန်းကျင်အား...